Munaasabadani uu xilka kula wreegayay wasiirka cusub ee Wasaarada Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Mudane Saciid Xueen Ciid ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaana goobjoog ahaa xubo ka tirsan labada gole ee dowladda, guddigii ay Xukuumadda u xilsartay ka qeybgalka munasabadaha xil wareejinta iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeyre oo munasabadda ka hadlay ayaa uga mahadceliyay wasiirkii hore ee Wasaaradda Xanaanada wada shaqeynta dhexmartay, isagoo kan cusub ka codsaday in xoolaha Soomaaliya loo iib geeyo Suuqyada caalamka.
Hanti dhowrka guud ee Qaranka Dr Nuur Faarax oo isna munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay in loo baahanyahay in Wasaaraddu ay soo kordhiso daqli cusub.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, dhirta iyo daaqa ee Soomaaliya Saalim Caliyow Ibrow ayaa ka sheekeeyay Waxyaabihii u qabsoomay, isagoo howlwadeenada ka codsaday in ay la shaqeeyaan Wasiirka cusub.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa xukumada soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in uu howsha halkiisa ka sii wadi doono, isla markaana uu balanqaadayo in uu dadaal badan ku bixinayo sidii loo hormarinlaha xoolaha dalkeena somaaliyeed.
Wasaarada Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa ee xukuumada Soomaaliya ayaa looga fadhiya sidii ay uu kobcinlaheed iib-geyta Suuqyada caalamanka xoolaha Soomaaliya.
Sidoo kale munaasabad uu xilka kula wareegayay Wasiirka cusub Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Mudane Maxamed CumarCeymoy,waxaana munaasabadaasi ka qeybgalya ku simaha Ra’iisul wasaaraha dalka ahna Ra’iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, Hanti Dhowrka guud ee Qaranka iyo Wasiirka ku xigeenkiisa.
Sii-hayihii xilka Wasiirkii Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Maadaama uu geeriyooday Allaha u naxriistee Wasiirkii hore ee Wasaaradaasi Mudane C/casiis Cumar Maxamed “Lafta-Gareen” ayaa sheegay in Wax qabadka Wasaaradda ay kamid aheyd in Soomaaliya ay kamid noqotay urur Caalami ah oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 130 dal kaas ka shaqeeya horumarinta arrimaha Kaluumeysiga.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ay ku guulesytay in Baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyo Sharciga Kalluumeysiga Soomaaliya kaas oo ay diyaariyeen khubaro ay Wasaaradda u igmatay.
Sidoo kale munaasabad taa lamid ah oo uu xilka kula wareegayay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan, waxaana munaasabadaasi ka qeybgalay mas’uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan.
Wasiirkii hore Wasaaradaasi Mudnae Khaalid Cumar Cali ayaa xilka wasaaradda si rasmi ah ugu wareegiyay wasaaradda Cusub.
Dhinaca kale muaasabad uu xilka kula wareegayay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan waxaana ka qeybgalay mas’uuliyiin uu kamid yahay Hanti Dhowrka guud ee Qaranka Dr Nuur Faarax Jimcaale iyo mas’uuliyiin kale.
Geesta kale Wasiirka cusub ee Wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska Eng Saalax Sheekh Cismaan Muuse ayaa maanta xilka wasaaradda kala wareegay Wasiirkii hore ee Wasaaraddaasi Eng Nadiifo Maxamed Cismaan ka dib munaasabad ay ka qeybgaleen mas’uuliyin dowladda Soomaaliya ka tirsan.